Apple waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto Tartan Gaar ah oo Maalinta Dunida ah oo leh guulo cusub iyo istiikarada | Wararka IPhone
Waxaan horey uga soo hadalnay marar badan oo ku saabsan Xiisaha Apple u qabo hagaajinta deegaankeena, shirkad u heellan dadaal badan si ay u saameyn ugu yeelato deegaanka sida ugu yar ee suurtogalka ah hawl maalmeedkeeda. Tamarta dib loo cusboonaysiin karo (Maalmo ka hor waxay ku dhawaaqeen in 100% xarumahooda ay la shaqeeyaan tamar dib loo cusboonaysiin karo), aalado leh barnaamijyo dib u warshadeyn waarta, ficillada gebi ahaanba lagama maarmaanka u ah shirkadaha sida lama huraanka ah u leh saameyn deegaanka shaqadooda darteed.
Iyo hada, Apple waxay rabtaa inay xusto Maalinta Dunida (Abriil 22) dhammaan dusha sare. Waxaan ku aragnay taariikhaha kale ee adduunka laga aqoonsan yahay sida Maalinta Haweenka, Apple markay tahay Maalinta Dunida waxay naga dooneysaa inaan sameyno isboorti, tan darteedna waxay bilaabayaan tartan cusub oo aan ku gaari doonno guulaha cusub ee barnaamijkeena Waxqabadka iyo istiikarada cusub ee Farriimaha. Boodka ka dib waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinta ficilkan cusub munaasabadda Maalinta Dhulka.
Waxa ugu fiican ayaa ah inaan la kulanno caqabadan cusub munaasabadda Maalinta Dunida oo heer caalami ah, waana wax aanan ku arkin caqabadaha kale ee Apple bilaabay. Haddii aan ka gudubno caqabadda ah in aan qabanno nooc kasta oo ka mid ah tababarka si aad noogu qaadato ugu yaraan Daqiiqado 30, waxaan heli doonaa billadaha xuska iyo istiikarada firfircoon ee loogu talagalay barnaamijkeena Farriimaha: dabaysha, astaanta dib u warshadaynta, iyo billada xuska Maalinta Dhulka ee 2018 lafteeda.
Marka waad ogtahay, gasho Apple Watch oo aad u bax si aad u sameyso dhammaan cayaaraha inaad awoodid inaad dhammaystirto dhammaan caqabadahaas ay wiilasha Cupertino nagu dhiirrigeliyaan, oo sida muuqata ay sidaas ku gaaraan nolol aad u caafimaad badan. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ka feejignaano caqabadaha mustaqbalka ee ragga Apple ay na siiyaan munaasabadda xuska adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto tartan maalinta Earth u gaar ah guulo cusub iyo istiikarada
Oggolow ama diid iibsiga "Qoyska" oo leh Codsi iibsi